Isikhangiso seNtengiso yeNtengiso yeAdsense kaGoogle (kwiBhlog yam) | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 3, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Adsense Google iyeyona nto iphambili yengeniso yentengiso kwibhlog yam ukusukela oko yaqalayo Nam ndinayo Commission Junction Iintengiso kwi-RSS feed yam, IKontera intengiso yemeko kwizithuba zam, kwaye Iintengiso Zekhonkco. Ndikwenza uphononongo ngoku Ndijonge kwakhona kwaye ufumane namaxesha athile Starbucks umnikelo ngePayPal. Wowu!
Kwinyanga elungileyo, ndinokutsala iidola ezingama-300, kude ne $ 10k + ukuba uJohn Chow utsalela ezantsi, kodwa uhloniphekile kwimbono yam. Uya kuqaphela ukuba iphepha lam lasekhaya licocekile kuzo zonke iintengiso. Ndingabeka intengiso kuyo yonke indawo kuyo, kodwa andifuni ukutyhala iintengiso kubakhenkethi ababuyela kwindawo yam amaxesha ngamaxesha. Endaweni yoko ndisebenzisa iintengiso zabantu eziza kundifumana ngokungathanga ngqo, ngokukhangela kunye neereferensi.
IGoogle Adsense yayiyeyona nto ingumthombo wengeniso… kude kube ngoku. Iintengiso Zekhonkco Uyichithile ngokusesikweni ingeniso yam yeAddsense kaGoogle, nangona kunjalo. Ngo-Meyi, ndenze iidola ezimbalwa. NgoJuni, ndithelekise uqikelelo lwengeniso ebisenziwa yiAdsense- kodwa bendingenayo IGoogle Adsense ilungiselelwe. Kodwa ngoJulayi, ndiyema ukuzisa malunga nokuphindwe kabini ngeeNtengiso zeKhonkco kuneeAdsense. Wowu.
Oluphambili Iintengiso Zekhonkco Impumelelo kukuba yakhelwe ibhlog, hayi iwebhusayithi. Bade babonelele iplagi yabasebenzisi beWordPress ukuze kube lula. Abathengisi banokuthenga 'iiposti' kunamagama. Yinto elula engummangaliso leyo kuzo zombini iibhlog kunye nomthengisi. Ukuba ubhala iposti ngesihloko osinikiweyo, ayothusi into yokuba ungathenga isihloko owaziyo ukuba siyayixhasa imveliso yakho? Ithuba elihle elimangalisayo.
I-WordPress: Iiplagi ezimbini ze-SEO zeMeta Tag Creation
Jul 7, 2007 ngo-1: 47 AM
Indawo yam sele ijikeleze iinyanga ze-3, kodwa iye yahlala phakathi kweGoogle PageRank updates. Ngaba kufanelekile ukufaka isicelo seakhawunti yomshicileli, okanye ngaba kufuneka ndilinde de kuhlaziywe uGoogle PageRank olandelayo?
Ndivile ukuba i-TLA iphinda ivavanye iindawo ezingavunywanga ekuqaleni, kodwa ndivile ukuba inkqubo inokuthatha ngempela ixesha elide.
Jul 7, 2007 ngo-10: 23 AM
Ngokunyanisekileyo andiyi kuhlawula i-akhawunti yomshicileli, ndingalinda. Okwangoku, ungasebenzisaAbaphathi beWebhu kaGoogle ukuqinisekisa ukuba indawo yakho ilungile. Ewe ukuya ku-TLA kodwa andiqinisekanga malunga nomgca wexesha. Ndiyifundile le posi apho ibhlogi yafumana indawo yakhe evunyiweyo. Okumangalisayo kukuba, wayengayifumani itrafikhi awayeyifuna ukuze enze irandi elungileyo. Ndingagxila ekuqhubeni itrafikhi engakumbi. Ndiyathanda ukuyenza ngokugqabhuka kokuphawula kwezinye iibhlog endingazange ndizindwendwele. Ndongeza kwincoko, anditsho nje ukuba 'hey!'. 🙂 Ndicinga ukuba uninzi lweeblogi zindwendwela abagqabaza babo. Fumana loo traffic kwaye yonke into iya kulandela!
Jul 12, 2007 ngo-6: 43 AM
Ndifake isicelo se-TLA kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kodwa ayizange yamkelwe. Qikelela ukuba iwebhusayithi yam ayivelisi itrafikhi ngokwaneleyo okanye inababhalisi abaneleyo be-Feedburner. Andiqinisekanga ukuba zeziphi iikhrayitheriya abazisebenzisayo kwinkqubo yokuvunywa?
Nov 17, 2009 ngo-12:32 PM
Andiqondi ukuba ababhalisi be-feedburner yenye yeendlela, ndinababhalisi aba-6 kwaye ndingene :).
Ikhasi lam le-4 nangona kunjalo, mhlawumbi yiyo loo nto ndingene...
Ngaba umntu unombono ukuba ungasebenzisa i-TLA kunye ne-google adsense kunye?
NgoJulayi 13, 2007 ngo-12:05 PM
Iingcebiso ezintle mva nje kwintengiso. Ndicinga ukubeka iiwebhusayithi ezimbalwa ezahlukeneyo kunye nokuvavanya amanzi ngeentengiso.
Okt 14, 2007 ngexesha 10:39 AM
Enkosi ngeengcebiso zakho eziluncedo kakhulu. Ngaba unokundixelela ukuba kunokwenzeka ukusebenzisa i-TLA kunye ne-Adsense kwiwebhusayithi efanayo? ayichasani noGoogle TOS? Enkosi!
Oktobha 14, 2007 ngo-5: 34 PM
Ayichasananga ne-TOS kaGoogle ukusebenzisa ezinye izixhobo zentengiso. Ngapha koko, uya kufumana uninzi lweeblogi ezinomvuzo oqhelekileyo osebenza ngemithombo emininzi.
Nov 19, 2009 ngo-1:59 PM
Ndisandula ukusebenzisa iintengiso zekhonkco lokubhaliweyo, ndiza kubona ukuba izinto zihamba njani!